कलेजो जोडिएका बालिकाको शल्यक्रिया, ३ करोड रुपैयाँ खर्च - Everest Dainik - News from Nepal
कलेजो जोडिएका बालिकाको शल्यक्रिया, ३ करोड रुपैयाँ खर्च
अष्ट्रेलिया । कलेजो जोडिएका १४ महिनाका दुई भुटानी बालिकालाई मेलबर्नका चिकित्सकहरुले सफलतापूर्वक छुट्टयाएका छन् । शरीर जोडिएका निमा र दावा उपचार गराउनका लागि आफ्नी आमासँग करिब २ महिनाअघि अष्ट्रेलिया आइपुगेका थिए ।
मेलबर्नमा रहेको मेलबर्न रोयल चिल्ड्रेन अस्पतालमा पेडियाट्रिक सर्जन डा. जो क्रामेरीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको उक्त सर्जरी ६ घण्टासम्म चलेको थियो। सर्जरीमा करिब डेढ दर्जन बढी स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
याे पनि पढ्नुस बच्चाका केही अनौठा क्रियाकिलाप हेर्नुस् तस्वीरमा
उक्त सर्जरीबाट उनीहरुको जोडिएका अंगलाई अलग अलग रुपमा बाँडिएको छ। चिकित्सकहरुका अनुसार उनीहरुको शरीरको मुख्य भागका साथै कलेजो समेत जोडिएको थियो। चिकित्सकहरुले कलेजो छुट्टयाउने प्रक्रिया आफूहरुले सोचेभन्दा अलि कठिन रहेको बताए पनि उनीहरुलाई सफलतापूर्वक अलग गरिएको छ।
चिकित्सकहरुले शरीर छुट्टयाएका दुबै बालिकाहरु उपचाररत रहेको बताएका छन्। उनीहरुको सर्जरीमा सर्जनहरुका साथै, एनेस्थेटिस्टस र नर्सहरुको टोली सहभागी थियो।
याे पनि पढ्नुस झोलामा राखेर फालिएको अवस्थामा चाबहिलमा शिशु जीवितै फेला
चिकित्सकहरुले यस किसिमको सर्जरी सामान्य नरहेको बताएका छन्। केही साताअघि नै हुनपर्ने उनीहरुको सर्जरी बालिकाहरुको शरीरमा पर्याप्त पौष्टिक पदार्थ नरहेको भन्दै पछि सारिएको थियो। ३ लाख ५० हजार डलर (करिब ३ करोड रुपैयाँ) खर्च लागेको बताइएको उक्त सर्जरीको सबै खर्च भिक्टोरिया राज्य सरकारले तिरिदिएको छ।
याे पनि पढ्नुस किन चीनका बच्चाहरुले प्वाल परेका पाइन्ट लगाउँछन् ?
उनीहरु उपचारका लागि मेलबर्न आएको केही समयपछि भिक्टोरियाका प्रिमियर ड्यानियल एण्ड्रयुले उनीहरुको खर्च आफ्नो सरकारले व्योहोर्ने आश्वासन दिएका थिए। यसैगरी बिरामीको हेरचाह तथा परिवारलाई अष्ट्रेलियामा रहनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक रुपमा सहयोग समेत संकलन गरिएको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट
ट्याग्स: Bhutni child, child